भगवानका मूर्ति उही छन् । मन्दिरका गजुर उसै गरी ठड्एिकै छन् । तर ढोका बन्दको बन्द अधिकांश मन्दिरका । पाप र पुण्यको भागी मनुष्यले बन्नु पर्ने विधिको वृतान्त यथावत छ । तथापि विश्वको उच्च शिखर रहेको नेपालका मन्दिर भित्रका भगवानले पनि कोरोना कहरको पीडा काटिरहेका छन् ।
निरंकुश राजतन्त्र भनी संघीय गणतन्त्रधारीहरुले धारेहात पार्ने राज्य सत्ता संचालकका पालामा यसरी मन्दिरका ढोका बन्द भएको खासै सुनिएको थिएन । तर विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने गणतन्त्रधारीहरुका पालामा भने पछिल्लो दुईबर्ष यता महिनौं दिन मन्दिरका ढोका ढप्किएका छन् । श्रद्धालु भक्तजनका दानले टीका पुष्प र प्रसादीको जोहो गरेर पुजारीको समेत गर्जो टर्ने मन्दिरका शंखघण्ट त कति बजे कति बजेनन् ? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहलिए पछिका सत्ताधारीहरुलाई लेखाजोखा नहोला ।
घर भित्रबाट मानिस निस्कन नमिल्ने भन्दै सरकार र स्थानीय प्रशासनले निशेधाज्ञा र लकडाउन लगाएर घर भित्र मानिस कोचे पनि पाँच छ महिना निरन्तर मन्दिरका ढोकामा ताला झुण्डिएकै छ । ८५ प्रतिशतभन्दा बढि ओमकार समाज रहेको नेपालका आस्थाका प्रतीक मठ मन्दिरका ढोका ढप्किंदा धेरैको आस्थामा चोट पनि नलागेको छैन । जब मानिस बाहिर निक्कन नमिल्ने उर्दी जारी हुन्छ मन्दिरकै ढोका बन्द गर्नु कति तादात्म्य मिल्यो ? राज्य संचालक हेमानका मानिसका अगाडी नीरिह संचारकर्मीको जिज्ञासा खासै अर्थ राख्दैन । तर आस्तिक मानिसका मनले भने पक्कै गलत नठान्ला । कलियुगका मानिसको कर्मका कारण सृजित जिवाणुको मार अदृष्य देउताले पनि मज्जैसँग व्यहोर्न पाए । भगवान प्रति मानिसको आस्था घट्दै जानु र हुने नहुने सबै कुरा गर्दै जानुले भगवान छन् भनिएका शक्तिपीठका भगवानले पनि मनुष्यको लीलाका अझ नजिकबाट नियाल्न पाए ।
परन्तुः विष्णुको अवतार मानिएका नेपालका तत्कालिन राजाहरुले शिवशक्ति स्वरुपा भगवानको प्रतीकका रुपमा मानेको मुलुकको प्रमुख शक्तिपीठ पशुपति नाथको ढोका पनि यो बर्षको हरितालिका तीजलाई लक्षित गरी खोल्न खोजिदै छ । काठमाण्डौ प्रशासनको संकेतले भगवान प्रति आस्था राख्ने मानिसको मन प्रफूल्लित नै होला । सुरक्षा सतर्कता अपनाएर जान दिने संकेतलाई राम्रो कदम पनि मान्नु पर्छ । कोरोनाको दोस्रो लहर छिमलिदै जाँदा हरेक गतिविधि संचालन भएकै छन् । यस्तो समयमा भगवानको शरणमा जान चाहनेलाई निश्चित मापदण्ड तोकेर मठ मन्दिरहरु खुल्ला राख्दा अन्यथा नहोला । फेरि खोपको प्रचुरता पनि तल्लो तहसम्म पुग्न थालेको र नेपालीको शरीरमा पनि कोरोनासँग लड्न सक्ने एन्टिबडी शक्ति विकास भइरहेको भनिएका समयमा मुलुकको प्रमुख शक्तिपीठ मानिएका मठ मन्दिरलाई अर्घेलो ठान्नु उपयुक्त हुँदैन ।
दोस्रो लहरको कोरोना छिमलेर अगाडी बढिरहेको पर्सा, बाराका भने मन्दिरको ढोका केही समय अगाडी खुलिसकेका छन् । तर मुलुकको राजधानी काठमाण्डौको पशुपतिनाथ लगायत अन्य क्षेत्रका पनि शक्तिपीठहरुका ढोका बन्दै थिए । यो खोल्न दिने स्थानीय प्रशासनको संकेत सकारात्मक छ । अब पनि पशुपतिनाथ लगायत मन्दिरका ढोका बन्दै राखे धर्मप्रति आस्था राख्ने मानिस प्रति राज्यले न्याय गरेको ठहरिदैन । आर्थिक उपार्जन हुने सबै क्षेत्र खोल्ने तर भगवानको दरबारको ढोको बन्द राख्ने राज्य जनप्रिय पनि हुन सक्दैन । राज्य त सबैलाई न्याय गर्ने पो हुनुपर्छ ।
#मन्दिरका गजुर #पाप र पुण्य #मनुष्य #श्रद्धालु भक्तजन
बिहिवार, भदौ २४, २०७८, ०४:०९:००